Plan to End Hunger - Somali Survey
Plan to End Hunger - Somali
Noo sheeg waxa aad ka fekerayso
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka madax bannaanaado gaajada. Maxaa loo baahan yahay in laga qabto gaajada marka laga hadlayo Oregon? Codkaagu waa muhiim.
Xoogaga Ka Hortaga Gaajada ee Oregon waxay u sameeyeen ra’yi ururintani si ay wax uga dhageystaan dadka ku nool gobolka oo dhan. Waxa aad nala wadaagto wuxuu naga caawin doonaa in aan go’aansano waxa uu gobolku u baahan yahay in uu diiradda saaro, isla markaana beddelo, si looga hortago gaajada.
Haddii aad bixiso cinwaankaaga email-ka, waxaanu kuu soo diri doonaa natiijooyinka ra’yi ururinta. Haddii kale, ra’yi ururinta waa mid aanu magac la socon waxaanan ilaalin doonaa waxyaalaha kuu gaarka ah. Haddii aad hayso su’aalo ama aad rabto in aad ogaato waxyaalo dheeraad ah oo ku saabsan shaqada the Xoogaga Ka Hortaga Gaajada ee Oregon, fadlan Chris Baker kala xiriir chris@oregonhunger.org.
* 1. Marka la eego dhammaan dadka Oregon, 560,000 oo inaga mid ahi had iyo jeer ma helaan cuntada aan u baahannahay. Adiga oo ka fikiraya bulshadaada kuu gaarka ah, waa maxay 3 waxyaabood oo fududaynaya in deris badani ay u daboolaan nolol maalmeedkooda?
* 2. Magaaladee ayaad ku nooshahay?
* 3. Miyay jireen waqtiyo ka tirsan 12 bilood ee la soo dhaafay mar aadan haysan lacag kugu filan oo aad ku gadato cunto ay adiga ama qoyskaagu u baahnaayeen?
* 4. Sidee baad ku tilmaami kartaa jinsiyadaada ama qowmiyaddaada?
Hindida Dhaladka Maraykanka/ Dhaladka Alaska
Aasiya ka soo jeeda
Madow ama Maraykanka Madow ah
Hisbaanik ama Laatiino ah
Jasiiraddaha Baasifiga/U dhashay Hawai
Kuwo kale (fadlan si gaar ah u tilmaan)
* 5. Haddii aad jeclaan lahayd in aanu kuu soo dirno doonaa natiijooyinka ra’yi ururintani isla markaana lagu geliyo bakhtiyaa nasiib lagu guuleysanayo kaarka hadiyada ee Visa oo ah $50, fadlan halkan geli cinwaankaaga email-ka: